Eyona nto ibalaseleyo kwi-CFTC eBrokers 2021 | Isikhokelo esipheleleyo sokuFunda isiRhwebo ngoJanuwari 2
Abona bahwebi beCFTC baGqwesileyo 2021
Ukuhlaziywa: 20 January 2021
Ngabaninzi abarhwebi abasebenza kwisithuba se-Intanethi, kunokuba nzima ukwazi ukuba ungaqala phi ngaphandle kokutshisa iminwe yakho. Kulapho umgaqo ungena khona.
IKhomishini yoRhwebo kunye neNkqubela phambili yoRhwebo (CFTC) ligunya elinoxanduva lokulawula imeko yezemali kunye nolawulo lwebrokeraji. Eli qumrhu lilawulayo li-arhente yomanyano eseMelika.
Nokuba sele uluqalisile uhambo lwakho lokurhweba, okanye usafuna umrhwebi onesidima- sele ubonile amaqonga aneelayisensi ezivela kwizinto ezithandwayo yi-CFTC, i-FCA kunye ne-ASIC ukubala ezimbalwa. Le mizimba yenzelwe ukukhusela kwiinkampani zobuqhetseba kunye nokukunika ukhuseleko kwiingxowa-mali zakho.
Kweli phepha, siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi xa ufuna umthengisi weCFTC. Siza kugqiba ngokuxoxa ngabona bathengisi babalaseleyo beCFTC ye2021.
I-Eightcap-Iqonga elilawulwayo eliSasazekileyo
Ubuncinci bediphozithi ye- $ 250 nje
Iplatifomu ye-100% yasimahla kunye nokusasazeka okuqinileyo
Intlawulo yasimahla ehlawulwa nge-debit / amakhadi etyala kunye ne-e-wallets
Amawaka eemarike zeCFD kubandakanya i-Forex, iZabelo, iiRhwebo, kunye neeCryptocurrencies
Tyelela i-Eightcap ngoku
Qala uhambo lwakho lokufikelela kuzo zonke iinjongo zakho zezemali apha.
Ngamafutshane, i-CFTC ngumbutho ozimeleyo owasekwa ngonyaka ka-1974. Eli yayilixesha lokuqala ukuba kubekwe imigaqo nemithetho yokubamba abarhwebi baphendule ngezenzo zabo kunye nokhathalelo lwabathengi.
Kukho iinguqu ezimbalwa okoko waqalwa umzimba. Umzekelo, iComodity Futures Modernization Act ka-2000 yayifakelwe ukudibanisa iCFTC kunye ne-SEC (Securities and Exchange Commission) ngombono wokulawula imeko yexesha elizayo. Umthetho weDodd-Frank ka-2010 ukhokelele ekubeni amandla e-CFTC andiselwe kwiimarike zokutshintsha. Ikwathetha ukuba kukho iseti entsha yezikhokelo emazilandelwe ngabarhwebi beCFTC.
Ukuqhubela phambili ishumi leminyaka kunye neyona njongo iphambili ye-CFTC kukwakha kunye nokugcina iimarike zokhuphiswano lwezezimali, oluzinzileyo nolubonakalayo. Iarhente ngoku isebenza ecaleni kweNational Futures Association (NFA). Oku kuqinisekisa ukuba uyakwazi ukurhweba ngokukhuselekileyo nangokukhuselekileyo.
Zithini iimfuno zeCFTC kwiBrokers?
Ibango elibekwe yi-CFTC kubarhwebi libanzi. Inkampani nganye yezemali (enje ngabarhwebi) kufuneka ifake isicelo sephepha-mvume kwikhomishini yolawulo. Umrhwebi oqinisekileyo kufuneka aphumelele kuvavanyo olungqongqo, abonise ukuqonda kukhathalelo lwabathengi, kwaye atsibe iihupu ngaphambi kokuba abenako ukuhambisa iimveliso zezemali kuluntu.
Zimbalwa ezinye iimeko eziyimfuneko ekufuneka zihlangatyeziwe ngaphambi kokuba inkampani isebenze ngokusemthethweni kwisithuba semali. Sibeke uluhlu kunye sichaza ezona mfuno ziphambili kubarhwebi abavela kwi-CFTC.
I-AML / CTF kunye neCDD
Xa kuziwa ekugcineni indawo yezemali indawo ekhuselekileyo necacileyo yabo bonke-ukwahlulwa kwe-AML (Ukuchithwa kweMali ngokuChasene neMali) kunye ne-CTF (Ukulwa ukuXhaswa kweMali ngobugrogrisi) kudlala indima enkulu. I-CDD (Ukukhuthala ngenxa yoMthengi) ikwayimfuneko encinci.
Isidingo esisemthethweni sabo bonke abathengisi beCFTC siqhuba inkqubo yokwazi abaThengi bakho (i-KYC) xa usayina umthengi ngamnye. Imigaqo ithi umrhwebi ngamnye kufuneka alandele amanyathelo ama-4 e-KYC a:
Chonga bonke abathengi
Qinisekisa isazisi somthengi
Yiba nokuqonda kumvuzo womthengi ngamnye
Ukongamela imisebenzi yotyalo mali yomthengi
Esi sizathu sokuba ubonelele nge-ID yesithombe kunye nobungqina bedilesi nanini na xa usayina kwiqonga elilawulwayo. Umthengisi weCFTC kufuneka athobele imigaqo ebekiweyo kwaye akubuze igama lakho elipheleleyo, idilesi yokuhlala, kunye ne-ID yefoto (njengepaspoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba).
Ngapha koko, uyakucelwa ileta esemthethweni okanye ileta yokusetyenziswa evela kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo, ingeniso yenyanga okanye yonyaka, inqanaba lomsebenzi, kunye nembali yamava okurhweba.
Inkqubo ekhankanywe apha ngasentla ingumxube weenkqubo ze-KYC kunye neCDD. I-KYC iqinisekisa ukuba ungulowo uthi unguye kwaye awunguye umngcipheko wemali xa kufikwa kumba wokuxhaphaza imali okanye ubusela besazisi. I-CDD iqinisekisa ukuba umthengisi unayo yonke idatha eyimfuneko ukubonelela ngononophelo lwabathengi kwiimfuno zakho
Ukuphuculwa kwamanyathelo okhuthazo aqhelekileyo aziswa xa umthengi ethathwa njengomngcipheko omkhulu. Njengomzekelo, umthengi ubhencekile kwezopolitiko okanye kwilizwe elinomngcipheko omkhulu. Kule meko, umthengisi weCFTC kufuneka enze uphando olunzulu ngakumbi nolomeleleyo kumthengi ochaphazelekayo.
Ingxelo yenkuthalo egcweleyo nenenkcukacha kufuneka ibandakanywe kwinkampani, kwaye i-CFTC ihlola rhoqo kumaqonga okurhweba ukuqinisekisa ukuba kuyathotyelwa. Masicinge ukuba uhamba ngokutyala imali eyi- £ 2,000 ngenyanga nganye, kwaye ngequbuliso uqalise ukufaka i- $ 15,000 ngenyanga. Umrhwebi wakho we-CFTC kuya kufuneka anike ingxelo malunga noku kwaye aququzelele uphando olunzulu lokufumanisa ukuba ivelaphi imali.
Ungeniso loPhicotho-zincwadi loNyaka
Sukuyenza impazamo ngayo-umthetho we-CFTC ngenqindi lesinyithi. Le khomishini yenye yezona zingqongqo kwihlabathi jikelele ngeendlela ezithile. Njengamaqonga alawulwa yi-FCA kunye ne-ASIC, bonke abarhwebi beCFTC banyanzelekile ngokusemthethweni ukuba babonelele kuphicotho zincwadi rhoqo ngonyaka.
Uphicotho-zincwadi lonyaka kufuneka luqulathe uluhlu olubanzi lweenkcukacha ezimalunga nezinto ezinje:
Umthamo wentengiso yeasethi yemali
Ukuthengiswa kwemida amanani
Ingeniso yeeasethi ezikumgangatho ophantsi
Ukuchithwa ngokupheleleyo kwemali
Ingcaciso eneenkcukacha malunga nomyinge osetyenzisiweyo
Umahluko ocacileyo phakathi kwee-odolo ezenziwe ngumrhwebi, kunye nomthengi
Ukuba olu phicotho-zincwadi alunalwazi, okanye umrhwebi kufunyanwa ukuba akayithobeli imigaqo nangayiphi na indlela, i-CFTC inamandla asemthethweni okuhlawulisa inkampani ekurhwebelana ngayo. Kwiimeko ezinzima, i-CFTC inokurhoxisa iphepha-mvume lokurhweba lomrhwebi.
Ukwahlula-hlulwa kweAkhawunti yeBhanki
Ukwahlula-hlulwa kweakhawunti yeBhanki bekuhlala kwindawo yezokhuseleko ngaphezulu kweminyaka engama-40 kwaye yabandakanywa kwi-SEA Rule 15c3-3 (Securities Exchange Act). Ukwahlulahlula yenye into eyimfuneko esemthethweni kubo bonke abarhwebi beCFTC.
Ngokusisiseko, bonke abarhwebi abalawulwayo bayacelwa ukuba babambe iimali zeakhawunti yakho kwiakhawunti eyahlukileyo kuleyo ikomkhulu lenkampani. Izizathu zoku zicacile-ngokwahlulahlula ii-asethi ezizezakho, umthengisi we-CFTC ukhusela imali yakho kwisehlo esibuhlungu solwaphulo-mthetho lwezezimali okanye ukuwa kwenkampani.
Kukho imida yokunyusa indawo xa isiza kubathengi beCFTC abasebenza kwi-forex, kwaye zezi zilandelayo:
Iibini eziphambili zemali: Ubungakanani bufakwe kwi-1: 50
Izibini zemali ezincinci: (ekwabizwa ngokuba ngababini bemali enqamlezileyo) Ukuphakama kufakwe kwi-1: 20
Iibhanki zemali zangaphandle: Ukuphakama kufakwe kwi-1: 20.
Ekuphela kwendlela ejikeleze ezi caps zokuba unyanzelwe ukuba uthathwe njengomntu onobuchule kubathengi. Ukuba kunjalo, kuya kufuneka ungenise amaxwebhu ahlukeneyo kumthengisi weCFTC omkhethileyo.
Ikhusela njani abaRhwebi
I-CFTC ikhusela abathengisi ngokugcina ukuthembeka kwiimarike zemali. Oku kuthetha ukungazinyamezeli iindlela zorhwebo eziyingozi, ulwaphulo-mthetho kwezemali, okanye ubuqhetseba babathengi.
Njengoko besesitshilo, i-CFTC idale imimiselo eliqela kunye neenqobo zokuziphatha kumaqonga okuthobela, kwaye ikhomishini iqinisekisa ukuba le mithetho iyalandelwa ngokwenza uhlolo rhoqo.
Ukongeza koku, umrhwebi ngamnye we-CFTC unyanzelekile ukuba abonise iinkcukacha zelayisensi yeCFTC kwiwebhusayithi yakhe. Oku akupheleli ekudaleni ukuzithemba kwicandelo lezemali kodwa kukunika uxolo lwengqondo lokuba inkampani isebenza ngaphakathi komthetho.
Zeziphi iiasethi ezinokuthengiswa kumthengisi weCFTC?
Akukho babarhwebi babini be-CFTC abafanayo, ke ukuba une-asethi ethile engqondweni ungathanda ukuthengisa-ke ngalo lonke ixesha jonga okukhoyo eqongeni. Ngelixa umrhwebi omnye enokuthi asebenze kuphela kwi-forex, enye inokunikezela malunga nayo yonke into eyaziwayo eyaziwayo.
Ukuba awuchazwanga malunga nokuba loluphi uhlobo lwezixhobo zezezimali ofuna ukuzithengisa ngomthengisi wakho weCFTC, ke uluhlu lwethu lweeasethi eziqhelekileyo kufuneka zikuncede kunye.
Izitokhwe kunye neZabelo eziSebenzayo
Kusenokwenzeka ukuba awuzange uthengise ngaphambili, kodwa kunokwenzeka ukuba uqhelane nezitokhwe kunye nezabelo. Yintoni eyayisenziwa ukuba ixakeke kakhulu urhwebo lwesitokhwe imigangatho ngoku ihlala iququzelelwa kwi-intanethi.
Ukuba ufuna ukubandakanyeka isabelo sokujongana ke uya kuba nakho ukuthenga nokuthengisa izitokhwe kwiinkampani ezahlukeneyo. Njengomzekelo nje, oku kukunika ukufikelela kwiinkampani ezinje ngeApple, iFord Motor Co, iAmazon, kunye neProcter kunye neGamble.
Xa kuziwa 'sasazaKolu hlobo lweeasethi - oku kubonisiwe njengokubuza / ukubiza ixabiso. Ngamanye amagama, umahluko phakathi kwento umthengisi aza kuyithengisela yona, kunye nento umthengi aya kuyihlawulela yona. Olu didi lweeasethi lukwenza ukuba ukwazi ukutyala imali kutshintshiselwano lwaseMelika njenge-NYSE kunye ne-NASDAQ, kunye neemarike zamanye amazwe ezifana ne-LSE (London Stock Exchange).
Xa kuziwa kwizabelo ezisebenzisana nomrhwebi, zihlala zintathu iintlobo ezahlukileyo. Okokuqala, kukho 'umrhwebi wokuphumeza' oya kuthi enze nayiphi na imiyalelo obayalele yona.
Ukuba ufuna ukuthengisa olu didi lweeasethi kodwa ufuna amava angaphaya, 'i-discretionary CFTC broker' ingangcono, njengoko bathenga kwaye bathengise ukuze unganyanzelekanga. Abarhwebi abanokuqonda benza umsebenzi omninzi, soloko ujonga nayiphi na imali eyongezelelweyo enokuhlawulwa ngolu hlobo lomboneleli.
Ukuba ukhetha indawo ethile embindini malunga nokuba ubandakanyeka kangakanani ekubekeni iiodolo, emva koko unokujonga 'umcebisi weengcebiso'. Olu hlobo lwebroker luphakathi phakathi kwezandla kunye nezandla.
Umcebisi weengcebiso ngeCFTC uya kukunika iingcebiso kunye nezikhokelo zokuhamba kweemarike kunokuba luncedo kuwe. Nokuba ufuna ukuthatha ingcebiso yomrhwebi okanye akunjalo kukhetho lwakho, kuya kufuneka ufundise inkampani kwihambo yakho elandelayo.
Ngamafutshane, injongo yee-indices kukubonisa ukuhamba kwexabiso leentlobo ngeentlobo zezitokhwe ezahlukeneyo- zihlala zisuka kuthengiso olunye. Umzekelo, i-FTSE 100 ilandelela izitokhwe ezili-100 ezinkulu kwi-LSE, kunye ne-Hang Seng Index ilandelela iifemu ezinkulu ezingama-50 ezidweliswe eHong Kong.
Emva koko unayo i-S & P 500, eyenziwe ziinkampani ezinobungakanani ezingama-500 ezivela kwi-NASDAQ kunye ne-NYSE. I-Dow Jones ikwisalathiso esithandwayo kunye nabarhwebi baseMelika. Oku kulanda iinkampani ezingama-30 ezinkulu zaseMelika-zonke ezihlawula izabelo.
Njengoko uyazi, kuya kufuneka ubhalise kumthengisi ngaphambi kokuba uqale ukurhweba nge-forex. Emva kwayo yonke loo nto, umrhwebi uya kuqhuba urhwebo kuwe kwisibini esikhethiweyo semali. Kwakhona, xa ukhetha umrhwebi, qiniseka ukuba iqonga liphethe iphepha-mvume lokuqinisekisa ukuba uthengisa kwindawo ekhuselekileyo.
Bonke abathengisi be-CFTC be-forex kufuneka balandele umgaqo we-FIFO (Okokuqala, kuQala ngokuPhuma). Ngokusisiseko, oku kuthetha ukuba ukuba uthengisa ngaphezulu kwesibini semali, kuya kufuneka uchithe esona sithuba simi simi simi side phambi kwayo nayiphi na enye.
Iibini ezinkulu zemali zibandakanya USD / CAD, GBP / USD, EUR / USD, USD / JPY, NZD / USD, AUD / USD, USD / CHF, kunye NZD / USD.
Izibini zemali ezincinci zibandakanya I-EUR / GBP, CHF / JPY, GBP / JPY, GBP / CAD, EUR / AUD, kunye ne-NZD / JPY.
Iibhanki zemali zangaphandle zibandakanya USD / HKD, AUD / MXN, NZD / SGD, EUR / ZAMA, GBP / ZAR kunye JPY / NOK
Umthengisi wakho weCFTC uza kwenza ukuba urhwebe kule marike yehlabathi 24/7. Kuxhomekeke ekubeni ubandakanyeka kangakanani kwinkqubo ye-FX yokurhweba, kunokucetyiswa ukuba ukhethe umthengisi weCFTC ekwabonelela ngezixhobo ezahlukeneyo zobugcisa, uhlaziyo lwangoku lweendaba kunye neetshathi zamaxabiso.
Le asethi ithengiswa iiyure ezingama-24 ngosuku kunye neentsuku ezisi-7 ngeveki. Abanye abarhwebi babhekisa kule asethi 'njengezinto ezinqabileyo' kunye 'nezinto ezinzima'. Nangona kunjalo, izinto zorhwebo zinokwahlulwa zibe ziindidi ezi-5 zokuhlelwa-kwamandla, izinyithi ezixabisekileyo, iimveliso zehlathi, ezolimo 'kunye' nokunye '
Nceda ufumane apha ngezantsi uluhlu lwezinto zamandla:
I-WTI ye-oyile engenachaphaza, Ukufudumeza ioyile, iBrent Crude,
Ukucocwa kweTerephthalic Acid (PTA)
I-Ethanol, iPropane, igesi yendalo, Ipetroli yeGulf Coast, iRBB Petroli (ipetroli ehlaziyiweyo yemixube yeoksijini)
Okulandelayo, sidwelise isinyithi esithengiswayo:
I-LME Copper, i-LME Nickel
ILadidi, iZinki, iTin, IAluminiyam, IAluminiyam ingxubevange
Cobalt, Molybdenum, Isinyithi esenziwe ngokutsha
Amatye axabisekileyo: Igolide, iPlatinam, iPalladium, iSilivere
Random Length Amaplanga kunye Umthi oluqinileyo
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho - ezolimo:
Umqhaphu, umbona, ingqolowa, i-oats, ukuRepewa, irayisi embi
Iimbotyi zesoya, Isidlo seembotyi zesoya, Isidlo seSoy, ioyile yeSoybean
Ubisi, iCocoa, ikofu, imbotyi yeAdzuki, ikofu yaseRobusta
Iswekile, Ijusi yeOrange egxile kwiFrozen
IiHogs eziMileyo, iiNkomo eziPhila, iiNkomo eziFundisayo
Okunye-ioyile yamasundu, irabha, amber kunye noboya.
Ukuba unomdla kurhwebo lwempahla kumthengisi weCFTC, ngethemba, uluhlu lwethu olungentla lukunike inkuthazo malunga nento onokufuna ukuqala ngayo.
Nceda ufumane apha ngezantsi kolunye uluhlu lwezona zorhwebo zithengiswayo kwimarike yemali yedijithali:
I-Binance Coin (BNB)
I-Bitcoin SV (BSV)
I-Bitcoin Cash (BCH)
Kukho ngaphezulu kwe-2,000 yeemali ezahlukileyo ekunikezelweni ngenxa yoko kufanelekile ukuba ujonge ukuba yeyiphi imali ye-imali yedatha ekhoyo kumthengisi wakho weCFTC. Ukuba umtsha ekuthengiseni i-cryptocurrensets, unokufuna ukuqala ngeakhawunti yedemo ukuze uzive malunga nendawo.
Uyifumana njani i-CFTC Broker enkulu
Ukurhweba kugcwele ukumangaliswa, okuhle nokubi-ke ukukhetha umthengisi ogcinwe kwimigangatho ephezulu yiarhente yaseburhulumenteni kubalulekile. Ngokwenza njalo, uyazi ukuba uphi kwaye ulindele ntoni ngokweenkonzo.
Sidibanise uluhlu lwezinto ekufuneka uzijongile xa uzingela abarhwebi beCFTC ababalaseleyo.
Kuyatshiwo ukuba abanye abantu bayathanda ukugcina iipotifoliyo zabo ziphantsi kwiiklasi ezimbalwa zeasethi. Oku kunjalo ikakhulu kubatyali mali abangenamava, njengoko kusengqiqweni ukufunda ukungena nokuphuma kweeasethi ezimbalwa - kunokuba uzame ukuba nguJack walo lonke urhwebo lwezemali.
Oko sele kuthethiwe, kungafika ixesha apho ukhathala ngokurhweba ngezixhobo zemali kwaye ufuna ukuzama into eyahlukileyo. Kungenxa yesi sizathu sokuba sicebise ukuba ujonge umthengisi weCFTC ngokhetho lweeklasi ezahlukeneyo. Oku kuyakwenza ukuba uhlukanise iphothifoliyo yakho, ukuba ungafuna njalo.
Ukusasazeka okubonelelwa ngumthengisi weCFTC kunokwenza umahluko omkhulu kwiinzuzo zakho zorhwebo xa zizonke. Ukusasazeka kubonisiwe kusetyenziswa 'iipipi', ngumahluko phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa ixabiso leasethi oyithengisayo.
Ukukunika umzekelo, ukuba uthengisa i-forex ye-EUR / USD kunye nokusasazeka kweepips ze-4, ukuphuka, kuya kufuneka ukwandise utyalo-mali lwakho ngaphezu kweepips ze-4.
Njengokusasazeka, iifizi zekhomishini zinokuchaphazela inzuzo yakho yorhwebo. Zonke i-CFTC brokers zahlukile, ke kuyakufuneka wenze olwakho uphando. Sifumanise ukuba abanye abarhwebi beCFTC abayithathi nayiphi na ikhomishini. Kwelinye icala, abanye bathatha ipesenti kuyo yonke into oyenzayo.
Ukukunika umzekelo wendlela umrhumo wekhomishini yomthengisi osebenza ngayo, jonga ngezantsi:
Uthengisa i-GBP / i-USD
Umthengisi wakho we-CFTC unentlawulo yekhomishini ye-0.8%
Utyala imali eyi- $ 3,000
Umthengisi weCFTC uza kuthatha ikhomishini eyi- $ 24 (£ 3,000 x0.8%)
Iindaba ezimnandi kuwe kukuba uninzi lwabarhwebi beCFTC esixoxa ngalo kweli phepha likuvumela ukuba urhwebe ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini.
Izixhobo zoHlahlelo lobuGcisa
Uninzi lwabarhwebi abanesidima babonelela ngezixhobo zohlalutyo lobuchwephesha. Ngaphandle kokuba ungumrhwebi ohamba yedwa usebenzisa urhwebo oluzenzekelayo, izixhobo zobuchwephesha zibaluleke kakhulu xa kufikwa kuqikelelo lokuziva ngokubanzi kwintengiso.
Apha ngezantsi sidwelise iindlela ezimbalwa ezisetyenziswayo zohlalutyo lobuchwephesha xa kufikwa kumba wokuhambisa isicwangciso esomeleleyo sokurhweba.
Umndilili weeNkcazo eziMiselweyo (ADX)
Umndilili wokuHamba oPhakathi (EMA)
Isalathi seVolumu yokulinganisela (OBV)
Isalathiso Samandla Ahlobene (RSI)
Umgca wokuHanjiswa / wokuHanjiswa (umgca we-A / D)
Ukuhambisa umndilili wokuDibana kokuDibana (MACD)
Ngokukodwa xa kufikwa kubathengisi be-newbie, izixhobo zemfundo zinokubaluleka ekufundeni nasekuqondeni izinto ezinje ngedatha yentengiso ebukhoma kunye neetshathi zembali. Ngendlela efanayo, izixhobo zokubonisa kunye nokubuyela umva kunokukunceda ekuqikeleleni ulwalathiso lwentengiso.
Emva kwayo yonke loo nto, uya kuhlala ufumanisa ukuba amaxabiso ekhonkco athambekele ekuziphindaphindeni ngelinye ixesha. Njengoko sichukumisile, enye indlela ebalaseleyo yokuzifundisa kukuzama indawo yeakhawunti yeedemo njengoko zikwenza ukuba urhwebe phantsi kweemeko zentengiso yokwenyani, ngaphandle komngcipheko. Nokuba yeyiphi okanye uzame inkqubo yokurhweba ngokwesiqhelo ukuze impumelelo yorhwebo ingekho kwaphela kumagxa akho angenamava.
Izinketho zeNkxaso yoMthengi
Akukho xesha apho inkxaso yabathengi ingabalulekanga. Kwilizwe elifanelekileyo, iqela lenkxaso yabathengi be-CFTC liya kufumaneka ukukunceda iiyure ezingama-24 ngosuku kunye neentsuku ezisi-7 ngeveki.
Inyani yile yokuba abanye banikezela ngenkxaso kwiintsuku ezi-5 ngeveki. Kananjalo, ukuba uthengisa kwintengiso ye-24/7 njenge-forex- oku kunokuba kungakulungeli. Ngamanye amagama, ff ufuna uncedo kule mpelaveki uyakushiyeka uphezulu kwaye womile, kwaye kusasa ngoMvulo kungade kube late.
Ngesi sizathu, soloko ujonga umrhwebi othile ukuze ubone ukuba loluphi ukhetho lweenkonzo zabathengi olukhoyo kubathengi (kwaye nini). Abanye banikela ngengxoxo ephilayo kunye ne-imeyile kunye nomnxeba.
Usenokuba sele uqokelele ngoku ukuba umthengisi ngamnye weCFTC uya kwahluka kancinci xa kufikwa kukhetho, iifizi kunye nomgaqo olandelwayo. Ukuba kukho indlela ethile yokuhlawula ekufuneka uyisebenzisele iakhawunti yakho yomthengisi-soloko uqinisekisa ukuba iyafumaneka eqongeni ngaphambi kokuvula iakhawunti.
Sifumanisa ukuba uninzi lwabarhwebi banikezela ngabarhanelwa abaqhelekileyo xa kufikwa kwiindlela zokuhlawula. Oku kuhlala kubandakanya ukutshintshwa kwebhanki yocingo kunye namakhadi etyala / okuthenga.
Ke kukho ii-wallets ezinje nge-PayPal, i-Skrill kunye ne-Neteller ekhulayo ekuthandeni ngenxa yokulula kwayo. Ezinye iinkampani zabarhwebi zinokukuvumela ukuba ubeke imali usebenzisa i-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin.
Inkqubo yokufaka kunye nokuTsala imali
Ke, ufumene umthengisi olungileyo we-CFTC owamkela indlela oyifunayo yokuhlawula-ngoku kuya kufuneka ujonge umgaqo-nkqubo wezemali. Ezinye iifemu zabarhwebi zibiza iifizi kubathengi ukuba bafake okanye barhoxise. Ungalufumana olu lwazi kwiwebhusayithi yeqonga.
Ngokubhekiselele kumaxesha abekiweyo enkxaso mali, indawo nganye iya kwahluka kancinane, kodwa uninzi luya kuyisebenzisa idebhithi / ikhadi lakho letyala okanye idiphozithi ye-e-wallet kwangoko. Oku kuthetha ukuba ungaqala ukurhweba kwangoko. Ngaphandle kokuba uthathe isigqibo sokufaka kunye nokudluliselwa kwebhanki, okunika elona xesha lincinci lokuqhubekeka.
Kwimeko yokurhoxa, oku kufanele ukwenziwa ngumrhwebi kwiintsuku ezimbalwa.
Izinketho zeAkhawunti zeCFTC
Izinketho zeakhawunti ziyahluka, kodwa ezinye zezona ziqhele ukubonwa zidweliswe apha ngezantsi kunye nenkcazo emfutshane yohlobo ngalunye.
I-Akhawunti yeNano, iMicrosoft kunye neMicrosoft
Uninzi lwabarhwebi luvile ngeakhawunti yomrhwebi esemgangathweni- kodwa ii-akhawunti ze-nano, ezincinci kunye nee-mini nazo zikhetha umphunga. Ezi akhawunti zincinci zilungele abatyali zimali abatsha abafuni ukubeka emngciphekweni imali eninzi. Ngokufanayo, bafanelekile kubarhwebi abanamava abafuna ukuzama isicwangciso esitsha ngemali encinci.
Ukuba awukwazi ukubona olu hlobo lweakhawunti lubhengeziwe, kufanelekile ukubuza iqela lenkxaso yabathengi beCFTC. Banokukulungela ukwamkela iakhawunti esemgangathweni ukuze ikulungele.
Ayisiyomntu wonke, kodwa ukuba ungumlandeli wenkolo yamaSilamsi, kwaye usafuna ukurhweba- ke jonga iakhawunti yamaSilamsi. NgokomThetho we-Sharia-Ukwamkela kunye nokuhlawula inzala akuvumelekanga ngokupheleleyo kwaye ke yi'haram '(njengokungcakaza).
Ukuba ungumlandeli wenkolo yamaSilamsi kwaye awukwazi ukubona olu hlobo lweakhawunti lupapashiwe, akukho bubi ekubuzeni ukuba ngaba umthengisi weCFTC uyakwazi ukumelana neemfuno zakho. Ngamanye amaxesha, baya kukunika 'iakhawunti engatshintshanga', ethomalalisa umdla kwizikhundla ezibanjwe ubusuku bonke.
Sithetha ngeakhawunti yeedemo kakhulu kuba zibaluleke kakhulu kubarhwebi kuwo onke amanqanaba amava. Ayingabo bonke abathengisi abanikezela ngeakhawunti yeedemo kubathengi, kodwa kuhlala kulula ukufumanisa ukuba ikho ekhoyo ngokundwendwela iqonga kwaye ujonge ngeenxa zonke.
Ngokusesikweni, iiakhawunti zedemo zikuvumela ukuba uzive urhweba ngaphandle kokubeka emngciphekweni nayiphi na imali. Kwakhona, bakulungele ukuvavanya iziqwengana ezintsha kwindawo engenabungozi.
Qalisa nge-CFTC Broker namhlanje
Ngethemba, ngoku sele unokuqonda okucacileyo kweemetriki ezibalulekileyo ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha umthengisi weCFTC. Ngapha koko, uyazi ukubaluleka kokuqhuba Olunye uphando ngaphambi kokuzibophelela kulo naliphi na iqonga labarhwebi.
Ngaphambi kokuba sifike kuluhlu lwethu lwabathengisi beCFTC abaphambili be2021, apha ngezantsi uya kufumana isishwankathelo sendlela inkqubo yokubhalisa esebenza ngayo.
Inyathelo lokuqala: Vula iAkhawunti yokuRhweba ngeCFTC
Ukuze uqale ukurhweba, kuya kufuneka ubhalise kunye nomthengisi weCFTC ochaphazelekayo. Qala ngokubetha iwebhusayithi yenkampani. Ukubhalisa / ukwenza iqhosha leakhawunti kuhlala kuyinto yokuqala oza kuyibona.
Uya kuthi emva koko ubonelele ngenkcukacha zakho. Eli linqanaba lokuqala lenkqubo ye-KYC, ngokokude kufuneke wazise umrhwebi ukuba ungubani kwaye uhlala phi. Uya kudinga ukubonelela ngomhla wakho wokuzalwa, inombolo yokhuseleko lwentlalo kunye neenkcukacha zonxibelelwano.
Inyathelo lesibini: Nika isiQinisekiso seSazisi
Kukho imfuneko yabo bonke abarhwebi beCFTC abalawulwayo ukuchonga umthengi ngamnye. Unoko engqondweni, kuya kufuneka uthathe ikopi yelayisensi yakho yokuqhuba okanye ipaspoti.
Kuya kufuneka ukuba ubonelele ngekopi yetyala elisetyenziswayo kutshanje (okanye into efana negama lakho elipheleleyo nedilesi yokuhlala kuyo), kunye nokuphendula imibuzo embalwa malunga nemeko yakho yezemali.
Inyathelo lesithathu: Faka iAkhawunti yakho
Sithethile malunga nokukhetha idiphozithi ngaphambili, ke khetha eyona ndlela ikhethileyo kwaye uqhubeke nokuxhasa iakhawunti yakho.
Inkqubo ihlala ilula, njengoko konke okufuneka ukwenze kukukhetha ukhetho lokuhlawula kwimenyu eyehlayo (ikhadi lekhredithi / ledebhithi njlnjl), kwaye uthathe isigqibo sokuba ungathanda ukufaka imali engakanani. Gcina iliso kwimirhumo yokuthengiselana kunye ne-akhawunti encinci.
Inyathelo lesine: Qalisa ukuRhweba / Zama iAkhawunti yeDemo
Ukuba uyafuna, ungaqala ukurhweba kwangoko nje ukuba iakhawunti yakho ixhaswe ngemali. Ukuba awukakulungeli ukuthatha i-plunge emva koko ungasebenzisa iakhawunti yedemo. Ewe, kunjalo, kwimeko yokuba umthengisi wakho weCFTC omkhethileyo unikezela ngezixhobo.
Abarhwebi abagqwesileyo beCFTC ka-2021-Okhetho lwethu oluphezulu
Ukuba ukulungele ukuqala ukurhweba ngeqonga elilawulwayo hayi, apha ngezantsi ufumana uluhlu lwethu lwabathengisi beCFTC abaphambili be2021. Umrhwebi ngamnye unikezela ngemirhumo yokhuphiswano, iimfumba zezinto ezinokuthengiswa, kwaye kunjalo- loo layisensi ibalulekileyo yeCFTC.
1. IG- Ukusekwa kweQonga lokuRhweba ngeMetaTrader4
Okokuqala ukumiliselwa phakathi kwiminyaka yee-1970, le broker yeCFTC inikezela uluhlu olukhulu lweeasethi kubandakanya ii-cryptocurrensets, izinto ezithengiswayo, izitokhwe, ii-indices, kunye nee-forex zemali ezibini- ezibandakanya iimarike ezili-17,000. Ukuthetha ngezibini zangaphambili, kukho iimfumba onokukhetha kuzo kweli qonga ukuze ungangabikho kukhetho olufutshane.
Ukuba uluhlobo lomrhwebi osoloko ehamba, uya kufumana i-app ye-IG iluncedo kakhulu. Umthengisi weCFTC uphuhlise usetyenziso lokusebenza kuzo zombini izixhobo ze-Android kunye ne-iOS (eyakho ine-iPhone). Sebenzisa usetyenziso lweselfowuni kukwenza ukuba uthenge kwaye uthengise kwiscreen, ungasathethi ke ngokufaka kunye nokurhoxa ngokulula naphi na apho ukhoyo. IG iyahambelana neMetaTrader4. Eli qonga leqela lesithathu elidumileyo likuvumela ukuba ufake iinkqubo zokurhweba ze-forex kwaye uza upakishwe ngezixhobo zophando eziphambili.
Idipozithi encinci yokuqalisa nge-IG yi- $ 250 (malunga ne- $ 320) kwaye ungabhatala ngogqithiso lwe-akhawunti yebhanki, okanye ngenkqubo ekhawulezileyo- idebhithi / ikhadi lekhredithi. Le femu yokurhweba ilawulwa ngokupheleleyo kwaye igcina iilayisensi ezivela kwi-CFTC, FCA, ASIC kunye nokunye.
Izixhobo eziluncedo zemfundo
Uninzi lwezibini ze-forex
Umthengisi ohloniphekileyo weCFTC
Inkxaso yoMthengi kuthiwa iyacotha
Ndwendwela IG ngoku
2. Forex.com - Urhwebo kunye neMT4
Lo broker weCFTC ubonelela ngaphezulu kwezibini ze-90 ze-forex kunye nezinye iiasethi ezinje ngee-cryptocurrencies kunye nesinyithi. I-Forex.com ayihlawulisi nantoni na ngokwekhomishini kwaye ukuvula iakhawunti kulula kakhulu.
Sifumana iForex.com ukuba inezona ndawo zisasazekayo kwindawo. Inani elincinci ekufuneka ulibekile ukuze uvule i-akhawunti yi- $ 50, kwaye ungaqala ukurhweba nge- $ 1 encinci ngokomyalelo ngamnye.
Ukuba kunokwenzeka ukuba ube ngumtyali mali wentengiso, ke uya kuba nakho ukufikelela kumgangatho ukuya kuthi ga kwi-1: 50 yokuphakamisa-ungasathethi ke ngobuninzi bezixhobo zolawulo lomngcipheko, izinto zorhwebo njengokulandela umkhondo wokuyeka ukulahleka, kunye nezalathi zobugcisa.
Kwabo banokuba namava amancinci kwiimarike, i-Forex.com ibonelela bonke abathengi ngeakhawunti yeedemo ukuphucula izakhono zabo. Uyakwazi ukurhweba nokuba kukwi-MT4 okanye iqonga lokuthengisa le-Forex.com ngokwalo. Lo broker, njengabanye kuluhlu lwethu, ulawulwa ngokupheleleyo kwaye unelayisensi yiCFTC.
Iakhawunti yedemo iyafumaneka kubathengi
Ubuncinci bediphozithi $ 50
Ukungasebenzi kwemali eyi-15 (emva kweenyanga ezili-12)
Akukho khuselo lubhalansi lubi
Ndwendwela i-Forex.com ngoku
3. I-Oanda - Ukhuphiswano oluphezulu kakhulu
Umthengisi weCFTC uphakama ngenxa yohlalutyo lokurhweba ngokugqwesileyo, ukusasazeka okukhulu kukhuphiswano kunye nezixhobo zokurhweba kwezemfundo. Ukuba ungumtyali mali omkhulu ke unethamsanqa- njengoko le nkampani inikezela ngemirhumo esezantsi kubantu abathengisa isixa esingentla.
Ukuvula iakhawunti kulula ngokulula kwiqonga lomthengisi- onokuyenza kwi-Intanethi okanye ngefowuni yakho ephathekayo. I-Oanda igcwele ngeempawu zokurhweba kubatyali mali ukuze bazenze kakhulu, kwaye siyathanda ukuba ungayilungisa itshathi esele ikho ukuze ihambelane nesimbo sakho sokurhweba.
I-Oanda ibonelela abathengisi ngokusasazeka kukhuphiswano- ngakumbi xa kufikelelwa kwizibini eziphambili njenge-EUR / GBP. Xa kuziwa kunyusa, abathengisi be-forex babanjwa ngo-1: 50- ngokwemida yeCFTC. Ukuba ufuna iakhawunti yeprimiyamu ngalo broker ulawulwayo, kuya kufuneka wenze ifolokhwe eyi- $ 20,000 encinci.
Izikhombisi zobuchwephesha eziphambili
Kulula ukuvula iakhawunti
Iimali ezingama-70 ezixhaswayo
Inani lezibini zokurhweba zeFX lilinganiselwe
$ 20,000 ubuncinci kwiakhawunti yeprimiyamu
Tyelela iOanda ngoku
I-Interactive Brokers -Iindidi ezininzi zeemveliso kunye neemarike
Eli qonga yenye yeefemu ezaziwayo zokurhweba eMelika. Ilawulwa ngokupheleleyo kwaye igcina iilayisensi ezivela kwi-CFTC kunye ne-SEBI (iZokhuseleko kunye neBhodi yoTshintshiselwano yaseIndiya) - kunye nezinye ezininzi.
Ukuvula iakhawunti kweli qonga kulula kwaye kukunika ukufikelela kwiimarike ezingaphezu kwe-90 kwihlabathi liphela, kubandakanya iibhondi, ii-ETFs, izitokhwe kunye ne-forex. Ukuba ufuna ukubhalisela ii-Interactive Brokers idipozithi encinci yi- $ 500. Indawo iyahambelana ngokupheleleyo nee-API, i-NinjaTrader kunye nee-EAs ezizenzekelayo
Ukufikelela kwiimarike ezingama-90
Khuphela umsebenzi womrhwebi
I-500 yedipozithi encinci inokubaninzi kakhulu kubaqalayo
Iimfuno zomda zikwicala eliphezulu
Ndwendwela ii-Interactive Brokers ngoku
5. I-Ameritrade ye -TD-Ilungele abatyali mali bexesha elide
Ukuba uluhlobo lomrhwebi othanda ukutyala imali kwixesha elide, i-TD Ameritrade inokuba yile nto uyikhangelayo. Lo broker weCFTC usekwe e-US kwaye ngokuqinisekileyo lelinye lawona maqonga awaziwayo apha ekhaya. I-TD Ameritrade ibijikeleze phantse iminyaka engama-50, ke emva kwesiqingatha senkulungwane yamava okurhweba, akumangalisi ukuba igama lazo lilandulele.
Xa usayinela le broker firm unokufikelela kukhuseleko olwahlukeneyo, uninzi lwalo onokuluthenga kwangoko ngonqakrazo lweqhosha. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa abathengi banikwa ilungelo lokungena kwezona ndawo zaziwayo zokutshintshiselana ngesitokhwe emhlabeni. Oku kubandakanya i-NASDAQ, i-NYSE kunye ne-LSE.
Iiasethi ekunikezelweni ngazo kulo broker weCFTC zibandakanya i-forex (isahlulo esipheleleyo se-forex), ukhetho, isitokhwe, ikamva kunye nemali efanayo. Ukongeza koku, unokutyala imali kwii-IPOs ngenkampani. Xa kuziwa kwimirhumo yomrhwebi, ungarhweba ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini xa ufikelela kwiimali ezifanayo okanye ii-ETFs.
Kukho ukubanjwa ngalo mnikelo wentengiso-yekhomishini- kufuneka ugcine utyalomali lwakho ubuncinci iintsuku ezingama-30. Ukusilela ukwenza oku kuya kuthetha ukuba kufuneka uhlawule umrhumo owongezelelweyo we- $ 13.90 kurhwebo ngalunye. Ngesi sizathu, kuluncedo ngakumbi ukuba ungumtyali mali wexesha elide. I-TD Ameritrade ilawulwa kakhulu phantsi kweCFTC ukuze uyazi ukuba ujongene nenkampani ekhuselekileyo.
Uninzi lweeklasi zeeasethi ezikhoyo
Imirhumo yokurhweba ukuba ubambe ingxowa-mali / i-ETF ngaphezulu kwenyanga
Ayilunganga intengiso yexesha elifutshane
Ndwendwela iTD Ameritrade ngoku
Ngeengcuka ezininzi kwimpahla yempahla yegusha kwishishini leenkonzo zezezimali, kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe umthengisi weCFTC- okanye ubuncinci obambe ilayisensi esemthethweni evela kwelinye igunya.
Oku kuya kuba ngumnatha wokhuseleko kwindawo esele ingaqinisekanga. Ezi nkampani azilifumani ngokulula iphepha-mvume labo, njengoko kukho imigaqo engqongqo yokuthobela ukuthanda ukugcina imali yakho yahlulwe. Lilonke, ukuba ufuna ukurhweba ngendlela ekhuselekileyo nekhuselekileyo yokurhweba ngendalo, singacebisa ukuba kusetyenziswe omnye wabarhwebi beCFTC abadweliswe kweli phepha.
Ngokusekwe e-USA, i-CFTC imele iKhomishini yoRhwebo lweKamva yezoRhwebo '. Le arhente ijongene nokulawula iimarike zorhwebo kunye nokuqinisekisa ukuba ii-CFTC brokers zisebenza ngaphakathi komthetho.
Zeziphi iiasethi endivunyelweyo ukuba ndizithengise nomthengisi weCFTC?
Zeziphi iiasethi onokuzithengisa ngokwenene zixhomekeke kumthengisi weCFTC osayine kunye naye. Ngelixa abanye abarhwebi babonelela ngemida ebanzi yeeasethi, abanye bagxila kuphela kuseto oluthile.
Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa umthengisi weCFTC?
Ewe kukhuselekile ukusebenzisa umthengisi weCFTC. Nawuphi na umrhwebi ophethe iphepha-mvume le-CFTC usebenza phantsi kwemithetho engqongqo ebekiweyo. Bonke abathengisi beCFTC bacacile kwaye bathembekile.
Ngaba ndingarhweba nge-cryptocurrency ngomthengisi weCFTC?
Ewe. Kwi-2015 i-CFTC ibize ukuba ii-cryptocurrensets zibekwe njengodidi lwezinto zorhwebo. Ngenxa yoko, ukusukela nge-2018 i-cryptocurrensets ilawulwa yi-CFTC.
Ndingaqiniseka njani ukuba umrhwebi ulawulwa?
Intloko kwiwebhusayithi yomthengisi, njengoko bonke abarhwebi beCFTC kufuneka babonise inombolo yelayisensi ngokucacileyo kubathengi. Ukuba awuqinisekanga, yiya kwi-BASIC (iZiko loLwazi lweMeko yokuDibana) eliyingxenye ye-NFA. Xa sele ulapho, ungafaka inombolo yelayisensi ukuqinisekisa ukuba ilungile.